Shirkadda Golis oo deeq gaarsiisay meelihii dabayluhu ka dhaceen. | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo deeq gaarsiisay meelihii dabayluhu ka dhaceen.
Shirkadda isgaarsiinta ee Golis Talecom Somalia aya deeq isugu jirta Bur,Bariis,Sokor,Timir iyo bustayaal gaarsiisay degeenadii dabaylihii roobabka watey ku dhufteen.
Khasaaraha ka dhashay dabaylahaas roobaabka watey ayaa ahaa kuwo aad u weyn oo saameeyey dhammaan nolosha degaanada Puntland oo dhan.
Xagga dadkii ku dhintay dabaylahaas roobabka watey ayeey hay’adda ka hortagga masiibooyinka Puntland ay ku qiyaastey in ay gaarayeen ilaa 300 oo ruux oo badankoodu ku dhinteen gobolka Nugaal,gaar ahaan deegaanada Eyl,Qarxis, Ceel dheere iyo goobo kaloo ka tirsan degmada Dangoroyo.
Dhinac kale,khasaarihii ka dhashay xoolaha nool ayaa qiyaastii lagu tilmaamey in ay kor u dhaafeen Malyan neef oo badankoodu ahaa xoolihii ku noolaa deegaanada kor ku xusan.
Qaylo dhaantii Aadami nimo ee laga sameeyey dhammaan degaanada Puntland ayaa shirkadda Golis waxay durbadiiba ka bixisay jawaab deg deg ah,iyadoo ku deegday dadkii dhibaatadu gaadhey raashin iyo bustayaal ay ka dugsadaan dhaxanta iyo dabaylaha lixaadka leh ee ka jiray deegaanadaas.
Hoggaanka Xiriirka Dadweynaha ee shirkadda Golis Mudane:Faarax Xaaji Mire ayaa sheegay in deegdaas ay qayb ka tahay waxtarka shirkaddu u sameeyso dadka dhibaateeysan iyo kuwa waxyeeladu ka soo gaarto masiibooyinka dabiiciga ah.
Wuxuuna yiri “ ma aha markii ugu horeysay ee ay shirkadda Golis jawaab deg deg ah ka bixiso dhibaatooyinkaas oo kale,shirkaddu waxay qayb ka tahay bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland,waxaana waajib ah in ay la qeybsato dadka dhibaatooyinka jira,gacanna ka gaysato wax tarkooda”.
Dhinaca Kale Hoggaanka Ganacsiga Mudane Cumar Faaruuq oo ku jirey guddigii ka koobnaa Culumida,Ganacsatada,Odayaasha ee booqdey deegaanadii dhibaatooyinku gaareen ayaa ku tilmaamey waxa dhacay in ay yihiin masiibo culus oo loo baahanyahay in si dhab ah wax looga qabto.
Wuxuuna sheegay in shirkadda Golis Talecom Somalia ay dadaal farabadan ku bixisey sidii wax loo gaarsiin lahaa dadka dhibaatooyinku ku habsadeen.
Markii hogaanku booqashada uu ku marayey goobaha dhibaatooyinku gaareen ayuu talo ahana wuxuu u soo jeediyey in dadka xoolaha uga dhinteen roobabkii dabaylaha watay loo gado Ari iyo Geel si loogu hayo meelihii ay ku noolaayeen.